နွေ ဦး ရာသီတွင်ကားဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးစပိန်မြို့ကြီးများ ခရီးသွားသတင်း
ခရီးသွားသတင်း | 30/04/2021 11:06 | ခရီးသွားနေရာများ
အအေးမိသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီးတစ်နေရာသို့လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်အပူချိန်ပူလာသည်ဟူသောအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ သာယာသောအားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့စပိန်အတွက်အကောင်းဆုံးမြို့6ဒီနွေ ဦး ရာသီမှာ
AND ... ငါတို့ကားနဲ့သွားတာကဘာလဲ။ ကျနော်တို့ထည့်သွင်း ခေါင်မိုးအရက်ဆိုင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်စွန့်စားမှုရန်! သင်ယခုရာသီအတွက်ထိပ်တန်းမြို့ကြီးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ ဆက်ဖတ်ပါ
2 Vall က de Boí, Lleida
5 Córdobaနှင့်၎င်း၏ patios မေလ
ဟုတ်ပါတယ်။ မက်ဒရစ်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ။ သင်ကပူနွေးသောမြို့မှလာလျှင်ဆောင်းရာသီတွင်အလွန်အေးနိုင်သည်၊ သင် ပို၍ အေးသောမြို့မှလာလျှင်နွေရာသီတွင်အလွန်ပူနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်နွေ ဦး ရာသီတွင်ပြန်လည်မွေးဖွားလာပြီးပွင့်လန်းလာသည်။ နွေးပြီးသားဖြစ်သောနေကဖိတ်သည် လှပသောလမ်းများနှင့်ပန်းခြံများမှတိတ်တဆိတ်လမ်းလျှောက်ပါ.
နွေ ဦး ရာသီ၌သင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည် အနားယူရန်နေရာကောင်း (Parake Juan Carlos I သို့မဟုတ် Madrid Río) မှစက်ဘီးစီး။ စီးပါ။ သင်လမ်းလျှောက်ရန်မလိုတော့ပါကကောင်းမွန်သောရာသီဥတုအခွင့်ကောင်းကိုရယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကားထဲတွင်ပါသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရန်မြို့ပြခရီးစဉ်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အများဆုံးချွေတာပြီးအဆင်ပြေ option ကို!
ဘာကြောင့်လဲ ကေဘယ်လ်ကားပေါ်တက်ပါ နွေရာသီနေရောင်ခြည်ကိုသင်ရေချိုးနေစဉ်တွင်အထက်မှစပိန်မြို့တော်ကိုလေးစားသလား။
အပြင်မှာသိပ်ပူလွန်းရင်အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ပါတယ် တော်ဝင်နန်းတော်နှင့် Almudena ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့လည်ပတ်ပါမည်။
Vall က de Boí, Lleida
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် အဆိုပါ pyrenees အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နွေ ဦး ရာသီတွင်အမြင့်ဆုံးတောင်များ၌ဆီးနှင်းများရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ချိုင့်ဝှမ်းများ၌စိမ်းလန်းစိုပြေနေပြီးမြစ်အားလုံးသည်ရေများစီးလျက်မြစ်များကိုပိုမိုစီးဆင်းစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် filter ကိုအမျိုးအစားမလိုအပ်ပါ လယ်ကွင်းများ၌ပန်းများဖြင့်လောင်ကျွမ်းသည်၊ နေထွက်လာပြီးကောင်းကင်သည်အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်ခဲ့ပြီးအလွန်သာယာသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အားလုံးအတူတကွစုဝေးကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုလည်းပျော်မွေ့ခဲ့သည် ကျောက်အိမ်များနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ရွာ, ပြတင်းပေါက်၌၎င်း၏အုပ်ကြွပ်များနှင့်ပန်းပွင့်အတွက် slate အဖြစ်အများအပြားကွေးကောက်နှင့်အသွားအလာအနည်းငယ်နှင့်အတူလမ်းများ။
နွေ ဦး ရာသီသည် Benidorm သို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်မဟုတ်ဟုဆိုသော်လည်းအမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် နေနဲ့ကမ်းခြေထက်ပိုတယ်
Benidorm သည်လူသွားလူလာများသည့်မြို့ဟောင်းရှိပြီးဘားများစွာရှိသည် သူတို့ကစပိန်တစ်ခွင်လုံးကတာပ့စ်တွေလုပ်တယ် နှင့်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာကြီးစွာသောလေထုနှင့်အတူ။ Tapas toရိယာအပြင် Benidorm တွင်စားသောက်ဆိုင်အမျိုးမျိုးရှိသည် နိုင်ငံတကာမီးဖိုချောင် ကမ္ဘာ၏ထောင့်တိုင်းကနေ။
သငျသညျမွို့၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ်းခြေနှစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော Mirador de Benidorm သို့လည်းသွားနိုင်ပါသည်။ ဒီရှုထောင့်ကနေ နေ ၀ င်မှုနှင့်နေထွက်ခြင်းကိုအထင်ကြီးလောက်သောအမြင်ဖြင့်သင်ခံစားနိုင်သည်.
Valencia ကကျွန်တော်တို့ကိုနေသာသောရာသီဥတု၊ ဖြည့်တင်းရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောကျန်ရှိနေသေးသောနေရာများနှင့်ပြင်ပစားပွဲများပေါ်တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်စပိန်နိုင်ငံမှပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံး paellas များနှင့်ကြိုဆိုသည်။ နွေရာသီမှာလူတွေများများစားစားမရှိတော့ဘူး ငါတို့ကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရေခဲမုန့်စားမယ်ဆိုရင်ငါတို့မှာကမ်းခြေရှိတယ်.
ငါတို့သွားနိုင်ပါတယ် အနုပညာမြို့တော်၊ မြို့ကိုလှည့်လည်။ သွားလော့ JardínBotánico… ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ!
Córdobaနှင့်၎င်း၏ patios မေလ
ကော်ဒိုဘာသည်မေလကစပိန်နိုင်ငံတွင်မေလလက်ဝါးကပ်တိုင်များနှင့်အိမ်များ၊ တံခါးများနှင့်လိမ္မော်ပင်များပွင့်နေပြီဖြစ်သည်။ အခြားနှစ်၏အခြားလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ မြို့အလင်းနှင့်အရောင်ရေချိုးသည်။ ထို့အပြင်ယခုလအတွင်းလူကြိုက်များသည့် Maystick ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကအိမ်များသည်လူအများကြားတွင်ပန်းများ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဖြတ်သန်းသွားသောသူတိုင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဂရုပြုကြသည်။
ကမ္ဘာကျော်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် မင်းကိုစကားမပြောဘဲထားခဲ့မယ်ဂျူးရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်။ ကတ္တရာများ၌အရသာရှိလှသည့်မြည်းစမ်းကြည့်။ Viana နန်းတော်နှင့် Alcazar ဥယျာဉ်များကဲ့သို့သောမြို့၏လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ တကယ့်အပျော်ပါပဲ။ ရာစုနှစ်များစွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်မတူကွဲပြားသည့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောနှောမှုနှင့်အတူစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။
ဆီဗီလာ ဤနှစ်၏ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် နွေ ဦး ကာလအထိကြာရှည်သည့် Andalusian ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့်Fairပြီလကုန်စည်ပြပွဲအတွက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာသည် Andalusian မြို့တော်၏လမ်းများကိုအလှဆင်ထားသောပန်းများအတွက်နွေ ဦး ရာသီအတွက်ရွေးရန်ရွေးချယ်ကြသည် ၎င်း၏လူများ၏ပွဲလမ်းသဘင်လေထုနှင့်ဒေသ၏အလှတရား။
အလည်အပတ် မီးလျှံ Seville အတွက်ပြသသည် ၎င်းသည်အထင်ကရနေရာများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မြင်းရထားဖြင့်စီးနင်းခြင်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ gastronomy ကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲသင်ဟာမြို့အကြောင်းသိသမျှအရာအားလုံးကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နွေ ဦး ရာသီ၌စနေဗီးလ်သို့တနင်္ဂနွေခရီးစဉ်ကသင့်အားမြို့တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးစေပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပြန်လည်ပတ်စေမည်။
မည်သည့်စပိန်မြို့များကိုသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ကိုယခုသင်သိပြီ။ မင်းခရီးလမ်းဘယ်မှာစမလဲ။ သင် Covid-19 အရေးပေါ်အခြေအနေမှပြimposed္ဌာန်းထားသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမည်ကိုသတိရပါ။ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလေ့လာပြီးခရီးစဉ်ကိုနှစ်သက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွားနေရာများ » နွေ ဦး ရာသီ၌ကားဖြင့်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးစပိန်မြို့ကြီးများ